Vaovao - Fiombonan'ny rehetra
Fikambanan'izao rehetra izao tsy misy elasticité miharihary amin'ny lalan'ny torsion. Izy io dia azo zaraina amin'ny fiaraha-miombon'antoka iraisam-pirenena tsy mitovy, fiaraha-miombon'antoka iraisam-pirenena quasi-constant ary iombonana iraisana tsy tapaka. 
① Fikambanan'ny rehetra tsy mitovy. Rehefa lehibe noho ny aotra ny zoro eo anelanelan'ny famaky roa mifamatotra amin'ny fiaraha-miombon'antoka maneran-tany, dia mihetsiketsika eo anelanelan'ny axe mivoaka sy ny axe miditra amin'ny tahan'ny hafainganana zorony eo noho eo ny fiaraha-miombon'antoka manerantany.
Ny karazana hazo fijaliana karazana henjana universe joint dia ahitana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena fork, hazo fijaliana hazo fijaliana, fanjaitra-roller mitondra, menaka tombo-kase, tanany, mitondra fonony sy ny ampahany hafa. Ny fitsipiky ny fiasana dia: ny iray amin'ireo rotaka mihodinkodina dia mitondra ny iray hafa mihodina amin'ny alàlan'ny hazo fijaliana, ary miaraka amin'izay koa dia afaka mihodinkodina manodidina ny afovoan'ny hazo fijaliana amin'ny lalana rehetra. Ny fanjaitra-roller ao amin'ny fanjaitra-roller mitondra dia afaka mihodina mandritra ny fihodinana mba hampihenana ny friction. Ny shaft mifandray amin'ny herin'ny fampidirana dia antsoina hoe ny input shaft (fantatra ihany koa amin'ny hoe shaft mavitrika), ary ny shaft output avy amin'ny fiaraha-mientana iraisam-pirenena dia antsoina hoe ny output shaft (fantatra ihany koa amin'ny hoe shaft drive). Miasa amin'ny toe-javatra misy zoro misy eo amin'ny fidirana sy ny fivoahana, ny hafainganam-pandehan'ny angular roa dia tsy mitovy, izay hitarika ho amin'ny fihovitrovitra torsional ny afon'ny vokatra sy ny ampahany fampitana mifandray aminy ary hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny ireo ampahany ireo.
② Quasi velocity tsy tapaka iraisana iraisana. Fikambanan'izao rehetra izao izay mamindra fihetsehana amin'ny hafainganana zorony eo noho eo amin'ny zoro novolavolaina ary amin'ny hafainganana zoro eo noho eo eo ho eo amin'ny zoro hafa. Izy io dia mizara ho: a) double quasi-constant velocity universal joint. Enti-milaza ny fiaraha-miombon'antoka maneran-tany izay ahena ho faran'izay kely ny halavan'ny tariby mitondra fiara ao amin'ny fitaovana fifindran'ny hafainganam-pandeha tsy tapaka. B) Convex block quasi-constant velocity universal joint. Izy io dia misy tonon-taolana eran'izao rehetra izao ary bokan-bozaka roa misy endrika samy hafa. Ny blocs convex roa dia mitovy amin'ny tsipika afovoany sy ny tsipika roa amin'ny fitaovana iraisana indroa. C) telo-pin quasi-constant velocity universal joint. Izy io dia misy tsipika telo-pin roa, gorodona eccentric mavitrika ary gorodona eccentric. D) Roller spherical quasi-constant velocity universal joint. Izy io dia ahitana ny pin shaft, spherical roller, universal joint shaft ary cylinder. Roller dia afaka manao hetsika axial ao amin'ny Groove, milalao ny anjara asan'ny fanitarana spline. Roller fifandraisana amin'ny groove rindrina dia afaka mamindra Torque.
Fotoana fandefasana: Oct-13-2021